Guddoomiyaha Maamulka Dawladda ee Degmada Wadajir oo ka War Bixiyay Qaraxyo Xalay ka Dhacay Degmadaas...
Axmed Xasan Caddow Daaci Guddoomiyaha Maamulka dawladda ee degmada Wadajir ayaa ka hadlay...
Date: 2012-01-11 01:08:50
Axmed Xasan Caddow Daaci Guddoomiyaha Maamulka dawladda ee degmada Wadajir ayaa ka hadlay qaraxyo Xalay ka Dhacay Degmada Wadajir.
Axmed daaci ayaa qiray in qaraxyadaasi ay jiraan isla markaana ,mid ka mid ah Sedaxda qarax ee ka dhacday Madiina I isagu uu goobtaasi tegay isla markaana soo qiimeeyyay waxyeelada ay gaysteen Qaraxyadaas.
Axmed daaci ayaa sheegey in Qaraxyadaasi ay ka danbeeyaan koleyba sida aragtidiisa ah Rag Deggan Degmada oo aan Cadow loo arakaynin isla markaan goobta uu booqday ay tahay meel markii labaad Miino la dhigayo.
Miinada ayuu sheegey Guddoomiyaha in la geliyay inta u dhaxaysa laba Guri oo isu dhow halkaasna laga yaabo in cid labada Cidood ee Gurigaas deggan ay ka danbeeyaan Falkaas arrintaasoo uu sheegey in iminka baaritaano dhab ah ka fulinayaan.
Guddoomiyaha Degmada ayaa sheegey in ay tahay markii labaad oo halkaa Miino lagu aaso balse markan markii ka horeeyay ay fashiliyeen ciidamada Maamulka kana saareen balse tii labaad ee la dhigo halkaas ay gaysato ama ay qaraxdaba.
Guddoomiayaha degmada ayaa intaa raaciyay in qaraxaas inta ay maqleen uu ku dhibtay hal qof balse aysan jirn cid kale oo dhibaato ay ka soo gaadhay arrintaasoo uu sheegey in ay jiraan dad loo soo qab qabtay oo ay haween ku jiraana haatana la baarayo.
Ugu danabayntii ayuu Guddoomiyaha Degmada Wadajir ugu baaqay shacabka ku dhaqan degmadaasi in ay la shaqeeyaan Ciidamada Maamulka oo maalmihii u danbeeyay sida uu sheegay hawl galo is daba jooga ah ka waday degmada Wadajir isagoona intaa raaciyay in ay sii laba jibbaarayaan hawl galada ay ku suganayaan ammaanka guud ee degmadaasi oo ka mid ah sida uu sheegey meelaha ugu nabddoon magaalada Muqdisho.